E wepụtara GParted 1.1 na ụfọdụ ndozi na ozi ọma | Site na Linux
GParted bụ otu n'ime ndị editọ editọ kachasị mma ị ga-ahụ maka GNU / Linux. Nwere ike iji ya site na ngwa ma ọ bụ site na Live ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Thatbụ na dị ka ọ nwere ike, ya mfe interface na ike nhọrọ na-ide ya na-eme ya otu n'ime ndị kasị dị mgbagwoju software na a, Atiya. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya dozie nsogbu ụfọdụ na nkebi, tebụl nkebi, wdg.
Ọ dị ugbu a n'ọtụtụ ebe ntanetị nke nkesa ka ị nwee ike iwunye ya ngwa ngwa na njikwa ngwugwu kwekọrọ ma ọ bụ site na ngwa ngwa. Ọfọn, ọ bụrụ na ị mataworị ya, mara na ọ laa mbipute ọhụrụ GParted 1.1.0. Mkpụrụ ọhụrụ nke ọrụ siri ike nke ndị mmepe ya iji nye anyị ngwaọrụ ka mma karịa ka ọ dị na nsụgharị ndị gara aga.
Curtis Gedak weputara GPated 1.1.0 a nke ị nwere ike ibudata iji wụnye site ugbu a gaa n'ihu, yana mmelite mmezi ọhụrụ a nke gụnyere ụfọdụ patches maka idozi chinchi, oganihu maka ntụgharị asụsụ nke mmemme ahụ n’asụsụ ụfọdụ, ọbụnakwa ụfọdụ mmelite ọhụrụ. Mgbanwe gụnyere nnabata nke minfo ngwa ngwa na mdir maka ịgụ sudo sitere na akụkụ FAT16 na FAT32, yana ikike iji gbakọọ nha JFS nkebi n'ụzọ ziri ezi.
Ọzọkwa, GPtọ 1.1.0 a tọhapụrụ gụnyere nkwado maka ịmata ATARAID, chọpụta ọnọdụ ọ nọ n'ọrụ, ma melite ngagharị nke ngalaba LUKS ezoro ezo. A dị mkpa xvfb-agba ọsọ dependency e tinyekwara maka eme ka ego na-eme ka distcheck ngwaọrụ n'oge Mee usoro nke a software ma ọ bụrụ na ị na-eji isi mmalite.
Na usoro nke njehie ndị edoziworo Have nwere ọtụtụ nsogbu nke ndị ọrụ ụfọdụ kọọrọ ma ọ bụ ndị otu mmepe ahụ achọpụtala kemgbe ịhapụ ụdị nke gara aga. Ozi ndị emepere n'oge eji ma ọ bụ nke gbochiri ya ịrụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị ibudata ụdị ọhụụ - Nnukwu weebụsaịtị nke oru ngo ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E wepụtara GParted 1.1 na ụfọdụ ndozi na ozi ọma
N'ihe banyere iji plasma, ana m akwado iji kde's partition manager (n'ọtụtụ distros a na-akpọ ngwugwu ahụ partitionmanager) kama nke a.
Onwere otutu ndi mmadu no ebe ahu ndi na amaghi na o di ka ndi mmadu nile na-acho obi uto. Agbanyeghi na ha dabere n'otu ulo akwukwo, o yiri ka mu na ha di ezigbo nma ma nwekwaa ihe ndi ozo nke kde uwa na n'ihi na n'oge ufodu o meela ka m si na nsogbu puta (karisie na pendrives nke na abia fat32) karia obughi windo. nwere ike ịrụzi na nke ahụ bụ faịlụ faịlụ nke ụwa gị.
Na ojiji na m nyere ma, nke abụghị kwa oke ma, na plasma onye yiri ka ruru eru ka m ma hey, na agba e mere ka masịrị.